“အခမဲ့ Websites များဖန်တီးနိုင်သည့် Site Builders များ”
Internet Journal "Learning Hub" ကဏ္ဍအတွက် ရေးသားပေးခဲ့သော နည်းပညာဆိုင်ရာလေ့လာစရာများ ဖြစ်ပါသည်။ မိမိကိုယ်ပိုင် Website များကို ဖန်တီးလိုသူများနှင့် လေ့လာလိုသူများအတွက် Site Builders များဖြင့် လွယ်လင့်တကူ ဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်သည့် Sites များကို ယခုတစ်ပတ်အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါသည်။ Site Builders များဖြင့် ဖန်တီးခြင်းသည် CMS စနစ်ဖြင့် ဖန်တီးခြင်းထက် လွန်စွာလွယ်ကူပြီး မိမိကိုယ်တိုင် Codes များအကြောင်းမသိရှိပါကလည်း ဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် အခမဲ့ တည်ဆောက်နိုင်သည့် Sites များစာရင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ အခမဲ့ Sites များတွင် ကိုယ်ပိုင် Website တည်ဆောက်ပါက အခမဲ့ဖြစ်သဖြင့် Limits များရှိနေနိုင်သလို မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် Domain Name သီးသန့်အသုံးမပြုနိုင်ဘဲ ၎င်းတို့၏ Domain Name နှင့် တွဲလျက်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ
ကဲ့သို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ဖန်တီးမည့်သူအနေဖြင့် စမ်းသပ်ဖန်တီးနိုင်သလို အမှန်တကယ်ကြိုက်နှစ်သက်မှသာ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သည့် Domain Name ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ 1.
အကောင်းဆုံး Site Builder စာရင်းထဲတွင် ထိပ်ဆုံးကပါဝင်နေပြီး Search engine များနှင့် လွယ်လင့်တကူရှာဖေနိုင်သော HTML5 websites များကို အခမဲ့ရေးသားနိုင်သည်။ Tools များကိုလည်း Drag and drop စနစ်ဖြင့်အလွယ်တကူဖန်တီးတည်ဆောက်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် Second level domain တစ်ခုဖြင့် အခမဲ့ 500MB storage နှင့် Bandwidth အနေဖြင့် 1GB ရရှိနိုင်သည်။ 2.
၎င်းသည် အမည်နှင့်လိုက်အောင်ပင် Professional Website တစ်ခုကိုဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် ပံ့ပိုးပေးထားသည်။ Tools များအားလုံးသည်လည်း Drag and drops စနစ်ဖြင့် ဖန်တီးထားသည်။ Web coding များဖြစ်ကြသည့် HTML/CSS များကိုပင် နားလည်ထားစရာမလိုအောင် ဖန်တီးနိုင်သည်။ 3.
၎င်းသည်လည်း Drag and Drop tools ဖြင့် Site တစ်ခုကို လွယ်လင့်တကူဖန်တီးနိုင်သလို Second level domain name နှင့် Storage 50MB ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Storage ပမာဏမှာတော့ အခြား Builders များထက် ပေးထားခြင်းနည်းသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတွင် Mobiles နှင့် Computer Browsers များတွင် ကောင်းမွန်လှပစွာ မြင်တွေ့နိုင်သည့် အားသာချက်တော့ရှိနေသည်။ 4.
Website template များစွာနှင့် Categories များစွာ ပေးထားပြီး မိမိကြိုက်နှစ်သက်သည့် Templates များဖြင့် ဖန်တီးနိုင်သည်။ Free ဖြစ်သည့်အတွက် မိမိဖန်တီးထားသည့် Site တွင် ၄င်တို့၏ ကြော်ငြာ ကို Banner အနေဖြင့် အောက်ခြေတွင် ထည့်သွင်းထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 5.
၎င်းတွင် 50MB Storage , 5MB file upload နှင့် 1GB Bandwidth ရရှိနိုင်ပြီး Template 100 အထက်ရှိသည်။ 6.
၎င်း၏ အားသာချက်မှာ Hosting အတွက် Unlimited ဖြစ်ပြီး Page အရေအတွက်ကိုလည်း Unlimited ပေးထားသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ အခမဲ့ Online Store ကိုပင် ဖန်တီးနိုင်ပြီး အကျိုးဆောင်ခအဖြစ်မူ Transaction တစ်ခုအတွက် 3% ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ 7.
2004 ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ပေါ်ပေါက်လာသော Jimdo သည် ယခုတွင်တော့ လူသုံးအများဆုံးစာရင်းတွင်ပါဝင်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ HTML5 Sites များကို Free ဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်ပြီး 500MB Storage ပေးထားသည်။ Online Store ဖန်တီးနိုင်ပြီး အခမဲ့အနေဖြင့် ကုန်ပစ္စည်း5မျိုးသာ ရောင်းချနိုင်ပြီး ရောင်ချရခြင်းအတွက် အခွန်အခ ပေးဆောင်ရန် မလိုပါ။ 8.
၎င်းသည်အသစ်ပေါ်လာသော Builder ဖြစ်သော်လည်း SEO friendly websites များကို Drag and drop tools များဖြင့် အလွယ်တကူဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်သည်။သို့သော် အားနည်းချက်မှာ အခမဲ့ page တစ်ခုသာ ခွင့်ပြုထားသည့်အချက်ဖြစ်ပါသည်။ Web templates များမှာတော့အခြားသော အခမဲ့ Builders များထက်သာလွန်ပြီး စတိုင်ကျလှပကာ သုံးစွဲသူများ စိတ်ဝင်စားမှုများပြားပါသည်။ 9.
၎င်းသည် အလွယ်ကူဆုံး ၊ အမြန်ဆန်ဆုံး Website Builder ဖြစ်ပြီး Site တစ်ခုကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းတွင် လွယ်လွယ်ကူကူတည်ဆောက်နိုင်သည်။ 500MB Storage နှင့် 1GB Bandwidth ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ Web templates များသည် Mobile devices များအတွက်လည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ 10.
စာမျက်နှာ5ခုအထိဖန်တီးနိုင်ပြီး 10MB Storage နှင့် 5GB Bandwidth ပေးထားသည်။ ၎င်း၏ ကြော်ငြာကို စာမျက်နှာတိုင်း၏ Footer တွင်ထည့်သွင်းထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ Website design template များကို လစဉ် အသစ်ဖန်တီးထားပြီး မိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ 11.
Easy-to-use website စာရင်းတွင်ပါဝင်ပြီး များပြားလှစွာသော Template များပေးထားသည်။ Free package အနေဖြင့် Site တစ်ခုကို စာမျက်နှာ 15 မျက်နှာအထိဖန်တီးနိုင်ပြီး 20MB Storage နှင့် 1GB Bandwidth ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် Customer support မပါရှိဘဲ မိမိဖန်တီးထားသော Website တစ်ခုနှင့်အတူ အလိုအလျောက်ဖန်တီးပေးထားသော Mobile website ပါရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 12.
၎င်းတွင် Personal နှင့် Online stores များဖန်တီးနိုင်သည့် Features များပေးထားပြီး Limitation အနေဖြင့် 1GB Bandwidth ပေးထားပြီး Storage ကိုမူ Personal site အတွက် 100MB နှင့် Online Store အတွက် 10MB သာပေးထားသည်။ ၎င်းတွင်လည်း အလိုအလျောက်ဖန်တီးပေးသော Mobile Version website ပါရှိပါသည်။ 13.
Free package အနေဖြင့် Website တစ်ခုသာပေးထားပြီး ၎င်းတို၏ကြော်ငြာများကို ထည့်သွင်းထားသည်။ Mobile sites အလိုအလျောက်ရရှိနိုင်ပြီး Bandwidth 500MB နှင့် 40MB Storage ပေးထားသည်။ Online Store အတွက်မူ Free အနေဖြင့် items5ခုသာရောင်းချနိုင်သည်။ 14.
၎င်း၏ ပေးအပ်ထားမှုသည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ Free package တွင် websites5ခုထိပေးအပ်ထားပြီး ကြော်ငြာ မပါသော hosting , customer support , build-in website statistic နှင့် site တစ်ခုချင်းစီအတွက် 1GB Storage ပေးထားသည့်အချက်က အခြားသော Builder များထက် သာလွန်နေသည်။ Yola တွင် စိတ်ဝင်စားစရာ Features များစွာရှိနေသေးပြီး အဓိကအချက်မှာ Account တစ်ခုထဲတွင် Site5ခုကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး ကြော်ငြာများနှင့် Pop-up များလုံးဝမပါရှိသည့်အချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလောက်ဆိုလျှင် Free websites များကို ဖန်တီးနိုင်မည့် Builder sites များကို ပိုမိုသိရှိသွားမည်ဟု ယူဆပါသည်။ မိမိအလိုရှိသည့် Personal sites များကို ဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အောင်ပြည့်ဖြိုး(PHYO Training Centre)